Ma ogtahay in gabar soomaali ah ay hogaamiso ururka riwaayadaha iyo masrixiyada Norwey oo dhan - NorSom News
Ma ogtahay in gabar soomaali ah ay hogaamiso ururka riwaayadaha iyo masrixiyada Norwey oo dhan
Monica Boracco waa qoraa qortay in ka badan 10 buug oo kuwa caruurta ah, waa sameeyaha hadalada(manus-forfatter) in ka badan sadex film oo kamid ah kuwa ugu caansan filimida norwiijiga, waxayna ka qaybqaadatay soo saarista ilaa 10 masrixiyadood oo lagu dhigay tiyaatarada Norwey, sidoo kalena waa gudoomiyaha ururka ay ku midoobeen dadka ka shaqeeya masraxa iyo riwaayadaha. Waxaas oo dhan waxaa kasii muhiimsan waa gabar uu asalkeedu soomaali yahay, hooyadeedna ay Norwiiji tahay.
Aabaha dhalay Monica wuxuu kamid ahaa diblumaasiyiintii katirsanaa wasaaradii arimaha dibada Soomaaliya, sidoo kale wuxuu kamid noqday baarlamaanadii soomaaliya. Monnica ayaa sheegtay inay iyadna rabto inay hada kusoo biirto siyaasada, maadaama ay kasoo jeedo qoys siyaasada Soomaaliya aad ugu milnaa. Awoowgeed wuxuu kamid ahaa baarlamaankii ugu horeeyay oo ay yeelato jumhuuriyadii Soomaaliya, sidoo kale eedeeyinkeed ayay sheegtay inay ka dhexmuuqdeen siyaasada, gaar ahaana ururadii u dagaalami jiray xuquuqda haweenka ay kuleeyihiin siyaasadada soomaalida.
Journalka gaarka ah oo ay leeyihiin ururka shaqaalaha ee LO ayaa warbixin ay kaga sheekeenayso waayaheed nololeed, gaar ahaan xaga fanka iyo masrixiyada ka diyaariyay gabadhan soomaalida ah. Waxay shahaadooyin xaga masraxa iyo farshaxanka ah ka haysataa jaamacada Oslo iyo iskuulka filimada ee kuyaalo Lillehamar. Sidoo kale Monica oo waa hooyo haysato shan caruur ah, una dhaxdo farshaxaniiste norwiiji ah oo lagu magacaabo Arne Borring.
Monica ayaa sheegtay in aabaheed uusan waligiis Norwey cagta soo dhigin, ayadna aysan waligeed Soomaaliya tagin, caruurnimadeediina ay degeen wadamo dhowr ah maadaama uu aabaheed diplumaasi ahaa oo hadba meel loo badalayay. Waxay sheegtay in aabaheed ay la kulantay iyadoo 30 sano jir ah mudo 25 sano ah oo ay kala maqnaayeen kadib, aysana xiriir sidaas u weyn uusan ka dhaxeyn iyada iyo aabaheed. Aabahay waxa uu ahaa mid aad ugu dhuun-daloola siyaasada maadaama uu ahaa diplumaasi, waxayna ahayd wax uu farac u lahaa maadaama dhowr qof oo qoyska aabahay ah ay aad ugu dhex muuqdeen siyaasada Soomaaliya. Eedaday la dhalatay aabahay waxay kamid ahayd dadkii ugu caansanaa ee u dagaalami jiray xuquuqda haweenka.
Xigasho: LO-aktuelt(Papiravis 17-08-2016, side 24-26).[adsenseyu1], dramatiker.no
Previous articleAmal Aden: Soomaalida qaarkeed waxay ku ciyaaraan mustaqbalka caruurtooda ee wadankan
Next articleMaxaa sababa in caruurta soomaalidu ay yihiin kuwa ugu badan ee ka dhaca iskuulada
Solberg: Go´aano cusub ayay dowladu soo rogi doontaa.
W. Caafimaadka oo sheegay mawqifka dowlada ee marada afka(Munnbind)
Keydka NorSom Velg måned august 2020 (16) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (62) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (40) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (110) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)